SOICARE G78 280ml ဖန်ခွက်ဝါး / သတ္တုအေးသောအခိုးအငွေ့ပူနွေးသောအလင်း ultrasonic မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီဖြန့်, တရုတ် SOICARE G78 280ml ဖန်ဝါး / သတ္တုအေးသောအခိုးအငွေ့ပူနွေးသောအလင်း ultrasonic မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီပျံ့နှံ့ထုတ်လုပ်သူများ, ပေးသွင်းသူများ, စက်ရုံ - Sunpai Industries Limited
သဘာဝပစ္စည်း – Bamboo base, Glass cover. Give youasafe product. And give youaluxury feeling.
ကိုရှင်းလင်းလွယ်ကူသော: Unlike other aroma diffusers with lids that are way too hard to grasp and open, this one can be simply lift up to refill and clean.
အလုပ် Mode ကို